Ronald Koeman iyo Alba oo ka hadleen xaalada messi kahor kulanka habeen dambe ee PSG. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Ronald Koeman iyo Alba oo ka hadleen xaalada messi kahor kulanka habeen...
Ronald Koeman iyo Alba oo ka hadleen xaalada messi kahor kulanka habeen dambe ee PSG.
Lionel Messi ayaa ku cadeeyay qaab ciyaareedkiisii ugu dambeeyay inay ka go’an tahhay inuu lasii joogo Barcelona inkasta oo shaki weyn uu ka qabo mustaqbalkiisa iyo inuu xiriir la leeyahay kooxda uu kaga hor imanayo Champions League ee Paris Saint-Germain, sida uu sheegay Jordi Alba.
Messi ayaa ku dhawaaday inuu isaga huleelo horyaalka spian iyo gaar ahaan kooxda barcelona balse kadib wax walaba la isla fahmay xidgaan ayaa xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay Camp Nou balse waxaa shaki weyni uu yimid marka uu xilli ciyaaredka cusbaa.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina ayaa ku jahwareeray xaalada kooxda uu waqtigaas ku suganaa Madaxweynihii hore ee barcelona Josep Maria Bartomeu kaasoo Messi uu markii dambe ku eedeeyay inuu cusbooneysiiyay heshiis uu ugu ogolaaday inuu si xor ah ugu laabto.
Messi ayaa ugu dambeyntii go’aansaday inuu sii joogo, isagoo aan ku qanacsaneyn fikirka ah inuu Barca ku jiido maxkamadaha, taasoo ka dhigeysa suurtagalnimada inuu ka baxo dhamaadka qandaraaskiisa 2021.
In kasta oo Barca aysan qarin damacooda ah inay cusbooneysiiso heshiiskiisa xaalad ah mid hogaamineysa hogaanka doorashada bisha soo socota, PSG ayaa u muuqata inay diyaar u yihiin inay Messi keenaan France xitaa qaar ka mid ah ciyaartoydooda ayaa si cad uga hadlay rajada ay ka qabaan.
Go’aanka uu gaadhayo si fiican ayaa looga fikirayaa oo si wanaagsan ayaa loo tixgelin doonaa ayuu yidhi Alba. Waxaan marar badan sheegay inaan ahay ciyaaryahan ka fiican garoonka dhexdiisa markii uu garoonka ku jiro.
Waa go’aankiisa waana in la ixtiraamo wax kasta oo uu sameeyo laakiin haatan fikirradiisa ayaa ka jira Barca oo waad ku aragtaa taas ciyaar kasta Xitaa haddii uu go’aansaday, ma dhihi doono inuu sii joogayo iyo in kale. Horey ayuu u yiri kahor ujeedada uu lahaa.
Maanta boqolkiiba 100 ayuu ka go’an yahay Laga soo bilaabo halkan waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysan karno horyaal oo aan u oggolaanno inuu go’aansado dhamaadka xilli ciyaareedka.
Waxa ay ciyaartoy kale ama naadiyada kale yiraahdaan, fiiro gaar ah uma lihin qolka labiska Leo wuxuu lahaan doonaa ereyga ugu dambeeya Ronald Koeman, oo lahadlay warbaahinta ka dib Alba, wuxuu ahaa nin yar oo diyaar u ah inuu ka hadlo Messi hadana wuxuu ku celceliyay inuu rajo weyn ka qabo kabtanka Barca inuu sii joogi doono dhamaadka ololaha 2020-21.
Ma aqaan hadii ay aheyd ujeedada laga leeyahay warbaahinta inay wax badan ka hadlaan Messi, fikradeyda ayaa ah inaan u diyaariyo kooxda iyo ciyaartoy kulan muhiim ah ayuu yiri Messi waa ciyaaryahan Barca waxaana rajeynayaa inuu sii ahaan doono ciyaaryahan Barca.
Previous articleReal madrid oo qorsheyneysa in 90 Million kusoo qaataan Halland.
Next articlemiyuu Martin Odegaard lasii Joogi doonaa kooxda arsenal